DEG DEG: Gianluca Lapadula oo soo gaarey Milano & caafimaadka oo uu marayo (Sawirro + muuqaal) – Gool FM
DEG DEG: Gianluca Lapadula oo soo gaarey Milano & caafimaadka oo uu marayo (Sawirro + muuqaal)
Raage June 24, 2016
(Milano) 24 Juunyo 2016 – Gianluca Lapadula ayaa soo caga dhigtay Milano isagoo soo gaarey isbitaalka ‘La Madonnina’ ee Milano oo uu caafimaadka ku mari doono.
Marka uu tijaabada caafimaadka dhamaysto waxaa lagu wadaa inuu saxeexo heshiis 4-5 sano ah oo oo sanadkii ku kici doona €1m iyo bareemiyo, waxaa kale oo uu heshiiskani ku kacayaa €9m oo euro iyo laacibka Jose Mauri oo la filayo in la amaahiyo Pescara.
“Wuxuu ahaa heshiis dhaqse badan. aad baana abaal ugu hayaa Galliani iyo madaxwaynaha oo soo kabanaya, waxaan sidoo kale u mahad celinayaa Massimo Oddo oo igu mataala [Miroslav] Klose, oo aan ku riyoodo.” ayuu yiri Lapadula.
Wuxuu noqday laacibkii ugu horreeyay oo KENYAN ah oo ka ciyaara Premier League…(Aqriso 10-waxyaabood oo uga baahan tahay saxiixa cusub ee Tottenham Wanyama)
11-KA FALOOB EE EURO 2016: Ka bogo 11-ka halyeey ee lagu hungoobey + Sawirro